Breaking News: Daw Aung San Suu Kyi Le Win Myint Telh In Minung 43 An Tlaih Hna – The Cherry Par
Breaking News: Daw Aung San Suu Kyi Le Win Myint Telh In Minung 43 An Tlaih Hna
February 1, 2021 February 1, 2021 Cherry News
Nihin February 1, 2021 ni ah ralkap nih aanaa an ting ni i, Kawlram hruaitu cozah lutlai pawl an tlaihmi hna hi min langhterasi rih lo nain, atu tan ah an tlaihmi dihlak min langhterasi cang. Daw Aung San Suu Kyi le President Win Myint telh in an tlaihmi hna minung 43 an si. Nihin an tlaihmi chungin Chin State in minung pakhat hmanh min langhter an si lo. Chin ramkulh hrambunh media cheukhat nih Chief Minister Salai Lian Luai le Hluttaw Speaker Pu Zo Bawi telhin ministers vialte an tlaih dih hna i, Chief minister Salai Lian Luai cu an thlah than rih lo tiah thawngpang theihasi rih hoi.
February 1, 2021 ni cu tuanbia chia pakhat ahatang peng cang lai. Kawlram kong ruah ah lungaleng i, ngaihachiatuk hringhran ko. Cozah lutlai pawl an tlaih hna ti thawng vun theih chap lebang cu celh dingasi hrimhrim lo mu. Pathian vel thawngin Vice President U Henry Van Thio cuahim ko tinakasi. Pathianatha tuk hringhran thlacam bawmh peng hna usih. A Hawi riantuanti hruaitu lutlai vialte an tlaih dih ko hna nain atu tiang ahcunamin langhter le hmuhasi lo tikah lunglawmhnak mitthlialuang. A tanglei ah hin ralkap nih aanaa an ting hnu ah an tlaihmi hna min list cu langhter dihasi. Kawlca ning in kan vun langhter.
ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက် စစ်အာဏာသိမ်းပွဲ အဖမ်းအဆီးစာရင်း; တပ်မတော်က အာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့ ၂၀၂၁ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းမှာ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရသူတွေရဲ့ အမည်စာရင်းတွေကို RFA က လက်လှမ်းမီသရွေ့ စုံစမ်းပြုစုထားပါတယ်။ လတ်တလော ဖမ်းဆီးခံထားရသည့်ပုဂ္ဂိုလ်များ (ပဏာမစာရင်း); ၁။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံ), ၂။ ဦးဝင်းမြင့် (နိုင်ငံတော်သမ္မတ), ၃။ ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင် (မန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်), ၄။ ဒေါက်တာအောင်မိုးညို (မကွေးဝန်ကြီးချုပ်), ၅။ ဒေါက်တာမြင့်နိုင် (စစ်ကိုင်းတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်), ၆။ ဦးဖြိုးမင်းသိန်း (ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်), ၇။ ဒေါ်နန်းခင်ထွေးမြင့် (ကရင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်), ၈။ ဒေါက်တာအေးဇံ (မွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်), ၉။ ဒေါက်တာသိန်းဝင်း (ပဲခူးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်), ၁၀။ ဦးခက်အောင် (ကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်), ၁၁။ ဦးလင်းထွဋ် (ရှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်), ၁၂။ ဦးညီပု (ရခိုင်ဝန်ကြီးချုပ်), ၁၃။ ဒေါက်တာမျိုးသိမ်းကြီး (ပညာရေးဝန်ကြီး), ၁၄။ ဦးဖေမြင့် ( ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး), ၁၅။ ဦးဉာဏ်ဝင်း (ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်), ၁၆။ ဦးဟံသာမြင့် (ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်)
၁၇။ ဒေါက်တာမျိုးညွန့် (ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်), ၁၈။ ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်း, ၁၉။ ဦးလှသိန်း (UEC ဥက္ကဌ), ၂၀။ ဦးမော် (ကယားပြည်နယ်၊ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဏာရေးဝန်ကြီး), ၂၁။ ဒေါက်တာမျိုးအောင် (နေပြည်တော်ကောင်စီဉက္ကဌ), ၂၂။ ဦးသောင်းဌေး (ကယား), ၂၃။ ဦးစိုင်းယု (ကယား), ၂၄။ မုံရွာအောင်ရှင် (NLD ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ဝင်), ၂၅။ ဦးစိုးညွန့်လွင် (ရှမ်းပြည်နယ် စီမံဘဏ္ဍာဝန်ကြီး)
၂၆။ ဦးစံကျော်လှ (ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဌ), ၂၇။ ဦးထင်လင်းဦး (စာရေးဆရာ), ၂၈။ ဦးအေးဖေ (ပြည်ခရိုင် NLD ဥက္ကဌ), ၂၉။ ညောင်လေးပင်မြို့နယ် NLD ဉက္ကဌ ဒေါ်စန်းစန်းမြင့်, ၃၀။ ဦးနိုင်ငံလင်း (ရန်ကုန်တိုင်းလူမှုရေးဝန်ကြီး), ၃၁။ ဒေါက်တာကျော်ကျော် (ရေတာရှည်လွှတ်တော်အမတ်), ၃၂။ မင်းသွေးသစ်(ဗကသများအဖွဲ့ချုပ်အမှုဆောင်ဟောင်း), ၃၃။ စောဖိုးခွား (အဆိုတော်), ၃၄။ ဒေါ်သန်းမြင့်အောင် (စာရေးဆရာမ), ၃၅။ မင်းထင်ကိုကိုကြီး (ဒါရိုက်တာ), ၃၆။ ဦးသောဘိတ (အလင်္ကာကြယ်), ၃၇။ အရှင်ပညာသီဟ (ရွှေညဝါဆရာတော်), ၃၈။ ဦးအရိယာဝံသာဘိဝံသ (မြဝတီမင်းကြီးကျောင်းတိုက်ဆရာတော်), ၃၉။ မောင်သာချို (စာရေးဆရာ), ၄၀။ ကိုမြအေး (၈၈ မျိုးဆက်), ၄၁။ ဦးဘုန်း (ဓာတု) (စာရေးဆရာ), ၄၂။ အိပန်ဆယ်လို (ခေါ်) အိမ့်ပိုးအု (NLD ပံ့ပိုးထောက်ခံသူ), ၄၃။ မောင်မောင်အေး (NLD ပံ့ပိုးထောက်ခံသူ).
← Kan ram nih thil chiahru tukaton lio si caah daih ko awkattha lo
Daw Aung San Suu Kyi Cu Zaangfah Tuk A Si Ee →